Mutungamiri weZINASU, VaNgadziore, Vanopiwa neDare Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Mutungamiri wesangano revadzidzi reZINASU, VaTakudzwa Ngadziore vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro, reZimbabwe National Students Union (ZINASU), VaTakudzwa Ngadziore, avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga, vaburitswa mutirongo mushure mekubhadhara zviuru zvishanu zvemadhora emuZimbabwe semari yechibatiso.
Pamutongo wavo, mutongi wedare repamusoro, Justice Davison Foroma, vatambira chikumbiro chaVaNgadziore chekuti vabvise mari yechibatiso kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba.
Gweta raVaNgadziore, VaWebster Jiti, vanoti kunze kwekubhadhara mari yechibatiso, VaNgadziore vanziwo vachengetedze magwaro avo ekufambisa nedare.
VaNgadziore vakakwidza nyaya yake kudare repamusoro mushure mekunge vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramjisitireti.
VaNgadziore vakasungwa kutanga kwemwdzi wapfuura mushure mekuita musangano nevatori venhau pedyo nekambani yeImpala Car Rental.
Pakuita izvi VaNgadziore vainzi vakatyora mutongo wedare wekuti vasasvike pedyo nekambani yeImpala Car Rental zvichitevera kusungwa kwavo mushure mekunge ivo nevamwe varatidzira pamahofisi ekambani iyi, iyo ine motokari inonzi yakashandiswa kupamba mumwe mudzidzi, VaTawanda Muchehiwa kuBulawayo musi wa30 Chikunguru.
ZINASU inoti Impala Car Rental ngaibude pachena kuti ndiyani aishandisa motokari yekambani iyi pakapambwa Muchehiwa.
Sangano iri rinoti richaramba richiratidzira kumahosifi eImpala Car Rental kudzamara kambani iyi yabuda pachena panyaya yaMuchehiwa.
Nemusi weChina chaivo nhengo dzeZINASU dzakavharira vashandi veImpala Car Rental mukati pane chimwe chitoro chekambani iyi chinotengesa zvinhu zvinoshandiswa pamotokari mumugwagwa weSpeke Avenue muHarare.
Vaimbove munyori musangano reZINASU, VaMakomborero Haruzivishe, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Ngadziore abuda mutirongo nyaya yekumurambidza kuita misangano pamwe nekuratidzira pakambani yeImpala kumudzvinyirira.
Kudare ramejasitireti, mukuru weTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti varatidzire zvine mhirizhonga munaChikunguru vanzi vadzoke kudare zvekare musi wa30 Mbudzi.
Mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvemukati menyika, VaKazembe Kazembe, nemukuru wemapurisa, Commission General VaGodwin Matanga, vaudza vatori venhau nhasi kuti mapurisa ave kuferefeta nyaya yemapurisa manomwe akakanda hutsi hunokatyidza mune rimwe bhazi muHarare nemusi weMuvhuro.
Vaviri ava havana kuburitsa mazita emapurisa aya uye kutaura kuti ari muchitokisi here asi kungoti vachatongwa pasi pemutemo wemapurisa wePolice Act.
Vanhu vakawanda vakakuvara vachibuda mubhazi nepamahwindo muchiitiko chakashorwa neveruzhinji munyika yose.
VaMatanga vazivisawo kuti vachapinza basa mapurisa chiuru gore rino vachiti vakapihwa mvumo yekuita izvi nehurumende, asi vange vakamira kupinza mapurisa aya basa nekuda kweCovid-19.
Zimbabwe Republic Police yakapedzesera kupinza mapurisa basa muna 2018.